"Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana hianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesôsy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?"- 2 Kôr. 13:5.
Tsy misy mpamadika tahaka ny famitahan'ny ota. Ny andriamanitr'izao tontolo izao no mamitaka sy manajamba ary mitarika ho amin'ny fandravana. Tsy avy hatrany dia miaraka amin'ireo famitahany rehetra i Satana. Ovany endrika amin'ny fisehoana tsara ireo fakam-panahy. (...) Manao dingana iray ny fanahy voafitaka, dia voamana hanaiky ny manaraka (...) Manao ahoana moa ny fiambenan'i Satana ny fandrika novelariny sy ny fijeriny ireo fanahy mandeha amin'ny lalana izay nomaniny! (...)
Tena ilaina ny fandinihan-tena akaiky ary eo ambany fahazavan'ny tenin'Andriamanitra, manadihady akaiky: Salama saina ve aho, sa tratry ny fahalovana ny foko? Nohavaozina ao amin'i Kristy ve aho sa mbola araka ny nofo, mitafy ivelany akanjo vaovao? Misikina ho toy ny manoloana ny fitsaran'Andriamanitra,dia jereo toy ny eo ambany fahazavan'Andriamanitra raha misy ota miafina, faharatsiana, sampy izay tsy mbola navelanao. Mivavaha, eny, mivavaha aloha, mba tsy ho voafitak'i Satana; mba tsy ho voatariky ny fanahy foana.
Iray amin'ny ota izay isan'ny famantarana ny andro farany ny fitiavan'ireo milaza ny tenany ho Kristianina fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Anontanio tsara ny fanahinareo. Mitadiava amim-pitandremana. Vitsy tokoa ireo izay, aorian'ny fandinihan-tena mahatoky, hijery ny lanitra ka hilaza hoe: "(...)Tsy tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra aho". Ho vitsy ireo izay afaka hiteny hoe: "Maty ny amin'izao tontolo izao aho, (...) ary rehefa hiseho Kristy fiainako, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra aho".
Ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra! Endre fahasoavana sarobidy! mihoatra noho nyvolamena tsara, Manondrotra sy manandratra ny fanahy mihoatra noho ny foto-kevitra hafa rehetra. Mampanakatra ny lanitra ny fo sy ny fitiavana. Raha miroboka amin'ny zavatra tsy maharitry ny tany, amin'ny fitadiavam-pahafinaretana, amin'ny hadalana ireo manodidina antsika, isika kosa raha mitady ny Mpamonjy dia amin'ny lanitra no mifandray; mitady an'Andriamanitra ny fanahy maniry famelan-keloka sy fiadanana, fahamarinana sy fahamasinana marina. Manova ny fanahy hanahaka an'i Kristy ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fibanjinana ny zavatra any ambony.— RH, 11 May 1886.